नेपाल आज | ७० वर्ष पुग्दासम्म जनताको सेवामा बिताएँ, अहिले टिकट पाएको छु, जनताले भोट दिनुहुन्छ
७० वर्ष पुग्दासम्म जनताको सेवामा बिताएँ, अहिले टिकट पाएको छु, जनताले भोट दिनुहुन्छ
सोमबार, २७ कार्तिक २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
जगतजंग थापा, प्रदेशसभाका लागि दैलेख क्षेत्र नम्बर १ ‘ख’ बाट संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेदवार हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य तथा दैलेख कांग्रेसका पूर्वसभापति थापा जिल्लाका बौद्धिक र संघर्षशील नेताका रुपमा पनि चिनिन्छन् । लामो समयको योगदानपछि यसपटक र पहिलो पटक थापालाई नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभाका लागि टिकट दिएको छ । थापाले आफू विजयी हुने धेरै कारणहरु प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग भएको कुराकानीको मूल अंशहरुः
चुनावको तयारी कस्तो छ ?
– अहिलेको अवस्था देशको वाम गठबन्धनले गर्दा हामी प्रजातान्त्रिक पार्टीहरुको पनि गठबन्धन गरेका छौं । हाम्रो जिल्लामा पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको छ । जनताले रुचीपूर्वक हेरिरहेका छन् । यसपटकको चुनावमा मूलतः लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धनबीचमै टक्कर हुने देखिरहेको छु ।
वाम गठबन्धन भएपछि हार्ने डरले तपाईहरुले पनि गठबन्धन बनाउनु भएको हो ?
– वाम गठबन्धनपछि त्यसलाई टक्कर दिनका लागि र हाम्रो विजय निश्चित गर्न, लोकतान्त्रिक दलहरुबीच धु्रवीकरण हुनु पर्ने अवस्थामा हामी पनि गठबन्धनमा गएका हौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो भयो, यसपटक पनि दोस्रोकै अपेक्षा छ कि ?
– होइन, कदापी होइन । लोकतान्त्रिक गठबन्धन देशको आवश्यकता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाई स्थायी बनाउने, संविधान कार्यान्वयन गर्न लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्टहरुको अधिनायकवादी समाजवादप्रति जनता सचेत छन् ।
अधिनायकवादको कुरा गर्नुभयो, कम्युनिष्टहरुको अधिनायकवादी व्यवस्थामा रुन समेत पाइँदैन भनेर सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नु भयो, के रैछ यो अधिनायकवाद भनेको ?
– एक व्यक्तिको हैकमका आधारमा शासन चल्ने, नागरिक अधिकार खोसिने व्यवस्था हो अधिनायकवाद भनेको । कम्युनिष्टहरु मिलेपछि यस्तो सम्भावना रहन्छ । जनताले केही सुविधा पाएका हुन सक्छन् । तर अधिकार पाएका हुँदैनन् । यस्तो व्यवस्था लाद्ने सम्भावना छ । हामी त्यसको विपक्षमा छौं । कम्युनिष्टहरु आधुनिक शैलीबाट अगाडि बढ्नु पर्छ, कम्युनिष्टको पुरानो शैली र नाराबाट अगाडि जान सकिँदैन भनेर मदन भण्डारीले भनेका थिए । उनको विचार र आदर्शलाई पछ्याएका कारण नेकपा एमाले अहिलेसम्म अस्तित्वमा छ । अब माओवादीसँग मिलेपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्वीकार गरेको एमालेले त्यो आस्था छाडेर अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढ्ला भन्ने हाम्रो शंका हो । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था जनताले मन पराउँदैनन । मदन भण्डारीको जनताको बुहदलीय जनवाद समाप्त हुन सक्ने देखिएको छ । जनताको आधारभूत अधिकार खोसिन सक्ने सम्भावना छ । यसलाई हामीले रोक्न सक्नु पर्छ ।
कम्युनिष्टहरु किन खराब हुन् ?
विश्वका कम्युनिष्ट मुलुकहरु जसरी उदय भएका छन्, त्यसरी नै समाप्त भएका छन् । विश्वमा नरसंहार मच्चाउने भनेको कम्युनिष्टहरुले नै हो । हजारौं लाखौं मानिसहरुको हत्या लेनिन, स्टालीन जस्ता तानशाहहरुले गरेका छन् । यस्तो नरसंहार मच्चाउनेहरुलाई नेपालका कम्युनिष्टहरुले पनि पूजा गर्छन् । त्यसकारण पनि नेपालका जनताहरु कम्युनिष्ट शासनदेखि डराउँछन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था गुम्ने हो कि भन्ने त्रासमा नेपाली जनता छन् । यहि कुरा बुझेर मदन भण्डारीले पुरानो कम्युनिष्ट ढर्रा छाडेर जनताको बुहदलीय जनवाद लागू गरे । त्यो भनेको हामीले अवलम्वन गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै हो । नाम मात्रै फरक हो । जनवाद भनेपछि कम्युनिष्टहरु अल्मलिने भएका कारण उहाँले त्यसो गरिदिनु भयो । जबजको मूल मर्म कम्युनिजम होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो ।
बेला बेला नेपाली कांग्रेस आफैले प्राप्त गरेको उपलब्धी रक्षा गर्न सक्दैन, जनमतको कदर गर्न सक्दैन भनेर आरोप पनि आउने गर्छ, के भन्नु हुन्छ ?
– नेपाली कांग्रेसले जनमतको कदर गर्छ । सधै गरिरहेको छ । जनताले नेपाली कांग्रेसलाई १७ सालमा दुई तिहाइ मत दिए । तर राजाले प्रजातन्त्र नै खोसिदिए । विपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गर्नुभयो । राजाले प्रजातन्त्रमाथि आँखा लगाउनु हुँदैन भन्दा राजा रिसाए । विपीको व्यक्तित्वसँग इष्र्या गरेर राजाले विपीलाई कैद गरेका हुन् । उनी पनि अधिनायकवादी राजा थिए । विपीको व्यक्तिलाई त भारतका प्रधानमन्त्री जवहारलाल नेहरुलाई पनि डाह थियो । नेहरुले भारतको उत्तरी सीमा हिमालय हो भन्दा विपीले विरोध गर्नुभयो । नेहरुले त्यसपछि माफी पनि मागे ।
राजासँगको अन्तरविरोध त नेपाली कांग्रेसको पहिलेदेखि नै भएको हो । तर अहिले तपाईहरु राजावादीहरुसँग मिल्न थाल्नु भयो ती ?
– राजावादीहरु सुध्रेर आउँछन भने हामी स्वीकार गर्छौं । हिजो हामीले नै बोेकेको हो राजालाई । हामी त राजावादी नै थियौं । एकातिर देश संकटमा छ, अर्कोतिर सिक्किम भारतले निलिसक्यो । त्यस्तो अवस्थामा प्रजातन्त्रवादी, राजावादी मिलेर देश जोगाउनुको विकल्प थिएन विपीसँग । आफ्नो विचार र शिद्धान्तभन्दा देश ठूलो हुन्छ भनेर नै विपीले मेलमिलापको नीति लिनु भएको थियो । नेपालका राजा भन्दा भारतकी रानी (इन्दिरा गान्धी) खतरनाक भनेर नै विपी नेपाल आउनु भयो । नेपाल रहे नै प्रजातन्त्र रहने हो भनेर उहाँ आउनु भयो । सात सातवटा मुद्धा अदालतमा थिए, फाँसी भए होस भनेर आउनु भयो । त्यसपछि राजाको पनि अलिकति चेत खुल्यो । राजाले पनि नरम व्यवहार देखाए ।
दैलेखमा तपाई पुराना र बौद्धिक नेताका रुपमा चिनिनु हुन्छ, के हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र मान्छ नेपाली कांग्रेसले ?
– नेपाली कांग्रेसले अब राजसंस्था ल्याउँदैन । राप्रपाले अहिले यी दुई धारणा छाडेको छैन । तर एकदिन छाडेर नेपाली कांग्रेससँग एकता गर्न सक्छ । राप्रपाको एजेन्डामा कांग्रेस जाँदैन, कांग्रेसको एजेन्डामा राप्रपा आउँछ । उहाँहरु विस्तारै कांग्रेसमै बिलय हुनुहुनेछ । भविष्यमा पार्टी एकता हुन्छ ।
पछिल्लो समय कम्युनिष्टहरुको मत बढी, कांग्रेसको कम जस्तो लाग्छ, अझै पनि जनताले कांग्रेसलाई साथ देलान् ?
– कांग्रेसको मत कम भएको छैन । कम्युनिष्टहरु जोडिँदा उनीहरु अलि बढी भएको जस्तो लाग्छ । तर त्यो मत सतही हो कम्युनिष्टहरुको ।
पहिले अरुको लागि भोट मागिदिनु हुन्थ्यो, अहिले आफै भोट माग्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई जनताले किन भोट दिने ?
– म आजसम्म दैलेखमा बसेर, जनताको सेवा गरेर, नेपाली कांग्रेसको निष्ठावान कार्यकर्ता भएर काम गरेको मान्छे हुुँ । सूर्यबहादुर थापाले मलाई जिल्लामा राजनीति गर्नुपर्छ भनेर प्रेरित गरे । २३ सालदेखि राजनीति गरेको मान्छे हुँ । त्यो बेला म विद्यार्थी राजनीतिमा क्रियाशील थिएँ । अहिले ७० वर्ष पुग्न लागे । यो बेला पनि म जिल्लामा उपलब्ध हुन्छु । समस्या पर्दा मसँग जनता आउनुहुन्छ । तर जीवनको यो उमेरमा मलाई पार्टीले टिकट दियो । मलाई जनताले पत्याउनु हुन्छ भन्ने लाग्छ । मेरो विपक्षमा वाम गठबन्धनका अमरबहादुर थापा मेरो क्षेत्रमा लड्न आउनु भएको छ । उहाँ त खासमा पारि १ (क) को हो । त्यहाँ पद पाएन भन्दैमा कहिले यता आउने कहिले उता जाने गर्नु भनेको पदलोलुपता हो । पद लोलुपता राख्ने व्यक्तिलाई जनताले मन पराउँदैनन् भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । उहाँ सांसद भइसकेको पनि मान्छे हो । आगन्तुक पर्यटक पदलोलुप भनेर उहाँलाई जनताले मत दिने छैनन् । उहाँले अस्ति अमेरिका र भारतको दलाल भन्नुभयो कांग्रेसलाई । कांग्रेसले प्रजातन्त्र रोजेका कारण हो कांग्रेस दलाल भएको ? मेरो प्रश्न छ उहाँलाई ।
अमरबहादुर नआउनु भएको भए पनि त कोही न कोही त आउँथ्यो तपाईसँग भिड्न ? अमरसँगै के समस्या पर्यो र ?
– आउथ्यो । तर यहिँको आउँथ्यो । यहि क्षेत्रका उम्मेदवार आउने थिए । पर्यटक आउने थिएनन् । जनताको पीरमर्का, भूगोल बुझेकालाई बाम गठबन्धनले टिकट दिन सक्थ्यो । तर दिएन । यहाँका कर्मठ कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर अमरजीलाई टिकट दियो । जसका कारण पनि यस क्षेत्रका जनता अमरबहादुरको उम्मेदवारीमा खुसी हुन सकेका छैनन् ।